(Dhagayso) Faysal Rooble: PM Cumar waa ku liidnimo inuu Puntland ku darqiyo nidaam xaaraan ah. – Radio Daljir
Maarso 28, 2016 2:09 g 0
Los Angeles, 28 – March – 2016 – Qoraa sare Faysal Rooble oo ah Maareeya Guud ee qaybta qorshayn ee Los Anjalis waxaa nasiib-darro wayn ku tilmaamay rabitaanka R/wasaare Cumar C/rashiid oo rabo inuu ka dhaadhicyo Puntland.
“R/wasaare Cumar waa ku liidnimo inuu Puntland ku darqiyo nidaam xaaraan ah, waa in la dhowraa axdi-qarameedyadii ay ummaddu horay ugu hishiisay, annigu waan garan-karaa haddii Cumar yiraahdo 4.5 waxaa dan ugu jirtaa anniga iyo Madaxwayne Xassan Shiih, balse ma fahmi karo inuu ummadda lasoo hor istaago waa nidaam dan u ah bulshada Soomaaliyeed” Sidaasin waxaa yiri Aqoon-yahan Faysal Rooble.
Md. Faysal waxaa uu sheegay in Jubbaland, Puntland iyo bulsho badan oo Soomaaliyeed ay kasoo hor-jeedaan nidaamka 4.5, waxaa uu hadalkiisa raaciyay in Puntlan dlooga baahanyahay mowqifkeeda in aysan waxba ka badalin. Waxaa kale oo uu si qoto dheer uga hadlay arrimaha doorashada 2016 iyo caqabadaha ku xeeran.
Hoos ka dhagayso waraysi uu la yeeshay wariye Maxamd Cabdullaahi Cali Kooshin,
Dhagayos Caawa iyo Daljir Isniin 28 – March – 2016 Maxamed Cabdullaahi Cali (Kooshin)